मलेसिया रोजगार : मलेसिया सरकारको ठूलो घोषणा, नेपालीलाई राहत ! - jagritikhabar.com
मलेसिया रोजगार : मलेसिया सरकारको ठूलो घोषणा, नेपालीलाई राहत !
भिसा सकेर मलेशिया आउन रोकिएका विदेसीहरु लाई बिना सर्त फेरी मलेशिया को भिसा रिनिउ गर्ने सकिने भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकासित गरको छ।
सो सूचना मा लिखित अनुसार १ मार्च २०२० देखि ३० सेप्तेम्बेर २०२१ सम्म सकेको भिसा कुनै कारण वस रिनिउ गर्न असफल भएको या आफ्नो देश फिर्ता गएर को’विद को कारण मलेशिया फिर्ता आउन नपाई कन भिसा सकिएको हरु ले पूर्ण बिना शर्त फेरि मलेशिया KDN बाट भिसा रिनिउ गर्न सकिने।
मलेशिया सरकार ले जब नया बिदेसी कामदार आउन स्वीकृति दिन्छ त्यति बेला पुरानो कामदार पनि आउन मिल्छ यस बिना सर्त निबेदन बाट। यो पनि हेर्नुहोस
स्वैच्छिक रूपमा अध्यागमन जानेहरूले भने सहजै स्वदेश फर्किन पाएको उनले बताए । ‘मलाई कम्पनीले बस भनिरहेको थियो, घर नगएकै ८ वर्ष भइसक्यो, कति गैरकानुनी रूपमा बस्ने ? श्रीमतीले पनि फर्कन दबाब दिइरहेकी थिइन्,’ सिन्धुपाल्चोकका गनी तामाङले भने, ‘कोभिडले झन्डै लगेको थियो । बाँच्न सफल भइयो । यो सबै मेरो परिवारको मायाले गर्दा भयो जस्तो लाग्यो ।’ कोभिडका कारण मलेसियामा कम्तीमा २ सय ३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अधिकांश अलेखबद्ध श्रमिक थिए ।